နုနုရည် သည် မြန်မာအမျိုးသမီး စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ မြန်မာမင်းနေပြည်တော်ဟောင်း မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သော အင်းဝမြို့တွင် ဦးဘမော်၊ ဒေါ်တင်ရွှေတို့မှ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၈ ရက် စနေနေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မောင်နှမ ၄ ဦးရှိသည့်အနက် သမီးဦးဖြစ်သည်။ ယခုအခါ နုနုရည ...
နေခြည်ရွှန်းလက် သည် မြန်မာ အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် MRTV-4 မှ ထုတ်လုပ်သော မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ သူမ အဓိကအမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် မျက်လုံးမှာအလွမ်း နှုတ်ခမ်းမှာမာန ရုပ်သံဇာ ...
နေခြည်ဦး သည် မြန်မာလူမျိုး အလှအပ ဘလော့ဂါ၊ မိတ်ကပ်ပညာရှင်၊ ဖက်ရှင်မယ်၊ သရုပ်ဆောင်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်သည်။ မိတ်ကပ်ပြင် ဗီဒီယိုများကြောင့် လူသိများပြီး ဖေ့ဘွတ်တွင် နေခြည်ပြတဲ့အလှအပ BeautyByNayChi အမည်ဖြင့် စာမျက်နှာ ဖွင့်ထားသည်။
နေတိုး သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုရ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရခိုင်အမျိုးသား ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင်မြို့ ဇာတိဖြစ်သည်။ နေတိုးကို ၁၉၈၁ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ရက်နေ့တွင် ဦးအောင်သန်း နှင့် ဒေါ်သန်းမြင့်တို့မှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မာန်အောင်မြ ...
နေထူးနိုင် သည် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နှင့် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ၏ အက်ရှင်ဇာတ်ကားများကြောင့် ထင်ရှားသည်။ သူသည် အက်ရှင်ဇာတ်ကားများနှင့် ရာဇဝင်ကားများကိုသာ အဓိကရိုက်ကူးသည်။
ဖြောင့်ချက် ရင်ဘတ်ထဲကလိပ်ပြာ ကြေကွဲကောင်းကင် သံမဏိဝတ်မှုန် ချစ်သူ့ကောက်ကြောင်း မှော်နတ်သမီး တိမ်လွှာဝတ်ရုံ အသက်တမျှ အဇ္ဈတ္တဆူး လျော်ကြေး လေပြင်းခြွေတဲ့နွေ ကောင်းကင်ခါးခါး နှင်းစက်ကကြိုး အကြေကောက် အတွင်းကြေ အက်ကြောင်း​၏နိဒါန်း အဆိပ်မိလိပ်ပြာ နှင်း ...
မောင်နေမျိုးကျော် သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာအဆင့်အထိ နာမည်ကြီးသွားသော စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း၏ အယ်ဒီတာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ မီဒို အဖွဲ့အစည်းတွင်လည်း ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူဖ ...
နေမျိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝတ္ထုတို၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ ကာတွန်းများ ရေးသားသောသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ နေမျိုးသည် အဖဆိုင်းဆရာကြီး ဦးစိန်တင်ဟန်၊ အမိ ဒေါ်စိန်ရင်တို့မှ ၁၃၂၄ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ရက်နေ့ တွင် မန္တလေးမြို့၌ မွေးဖွား၊ မွေးချင်းယောက်၌ ဒုတိယသားဖြစ် ...
နေမျိုးဇင် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းနှင့် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၅-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ရက်နေ့တွင် အဖ ဦးငွေဇင် နှင့် အမိဒေါ်ခင်သီတို့မှ အမှတ်၊ ကမာလမ်း၊ ရေနံ့သာရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၌ မွေးဖွားသည်။ မိဘများမှာ မြိတ်ဇ ...
အမည်ရင်း - ဦးတင်မြင့် မွေးဖွားရာ ဒေသ - အောင်နန်းရွာ၊ ရေစကြိုမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့ မိဘအမည် - ကုန်သည် ဦးဘဆန့် + ဒေါ်အေးကြွယ် မွေးသက္ကရာဇ် - ၁ဝ၊ ၁၊ ၄၃ စနေနေ့ ကလောင် အမည်ခွဲများ - တင်မြင့်
တေးရေး ကိုနေဝင်း သည် မြန်မာပြည်တွင် တစ်ချိန်က ခေတ်စားခဲ့သော မောင့်လပြည့်ဝန်း သီချင်းအား ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ရေးစပ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ပန်းချီကားများလည်း ရေးဆွဲသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကိုနေဝင်းကို ၁၉၅ဝခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက် အသက် ၁၃၊ ၁၄နှစ် ဝန်းကျင်မှာ စ ...
နေဝင်းမြင့်သည် အမျိုးသားစာပေဆု ၃ ကြိမ်ရ မြန်မာ စာရေးဆရာဖြစ်ပြီး ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်း ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ကုန်းဇောင်းကျေးရွာ၌ အဖ-ဦးဘရွှေ၊ အမိ-ဒေါ်သိန်းတို့က မွေးဖွားသည်။ အမည်ရင်းမှာ ဝင်းမြင့်ခင်မောင်ဝင်းဖြစ်သည်။ ဇနီး- စာရေးဆ ...
ဒေါက်တာနေဝင်း သည် ဆရာဝန်၊ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အဖမ်းမခံရခင်ကာလတွင် တော်ဘုရားလေး အမှတ်တရ စာပေဆုရွေးချယ်ရေး ကော်မတီဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ဖခင်မှာ ဦးအောင်ခင်ဖြစ်သည်။ ဇနီးဖြစ်သူမှာ ဒေါ်သန္တာဖြစ်ပြီး သမီးမှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သ ...
နေအောင်ကို ၁၉၈၀ ပြည့်တွင် မွေးသည်။ ဥပဒေနှင့် စီးပွားရေး အထူးပြုနှင့် အရီဇိုးနားတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရသည်။ မဟာဘွဲ့ကို စီးပွားရေးဘာသာနှင့် လန်ဒန်စီးပွားရေးကျောင်းမှ ယူသည်။ အမ်ဘီအေဘွဲ့အတွက် စတန်းဖို့တက္ကသိုလ်တွင် တက်သည်။
နေဦးကျော်ထွန်း သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်တုရင်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စစ်တုရင် အင်တာနေရှင်နယ်မာစတာ IM ဘွဲ့ရ ၅ ဦးထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းစစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲများနှင့် နိုင်ငံတကာစစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ ...
နော်စီဖိုးရာစိန် သည် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကရင်လူမျိုး နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ နော်စီဖိုးရာစိန်ကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ကျောင်းဆရာမအဖြစ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်င ...
နေးရာ၏ ထွက်ဆိုချက် သည် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိ နေးရာဟူသည့် အမည်တစ်ခုတည်းကိုသာသိရသော မိန်းကလေး တစ်ဦးက ၁၉၉၀ အောက်တိုဘာ ၁၀ တွင် ကွန်ဂရက်ရှင်နယ် လူ့အခွင့်အရေးကွန်ဖရင့် ရှေ့မှောက်၌ လိမ်လည်သက်သေခံချက် ဖြစ်သည်။ ယင်းသက်သေခံထွက်ဆိုချက်မှာ အများပြည်သူထံ ကျယ်က ...
ကိုနေ သည် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသား စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ထုတ်ဝေသောသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးမြင့်ကျော်စိုး ဖြစ်ပြီး အဖဦးကြူး-အမိဒေါ်ခင်ဌေးတို့မှ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းမြို့၊ စာရေးရွာတွင် မွေးဖွားသည်။ ၁၉၈၂တွင် ...
နှင်း​သွေးယု​အောင် သည် မြန်မာ ​မော်ဒယ်နှင့် အလှမယ်ဖြစ်ပြီး ၅ ကြိမ်​မြောက် မြန်မာ မယ်စကြာဝဠာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ပြိုင်ပွဲတွင် သရဖူရရှိခဲ့​ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု မယ်စကြာဝဠာ ၂၀၁၈ ဖြစ်၍လာခဲ့သည်။
ပက်ထရစ်ရှာ သည် မြန်မာ သရုပ်ဆောင်နှင့် သရုပ်ပြမယ် ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် ပါဝင်သော မကြွေပါနဲ့ ဆာကူရာ သည် ပထမဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်သကဲ့သို့ မြန်မာ့သရုပ်ဆောင်သမိုင်းတွင် အသက်အငယ်ဆုံး ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်လည်း စာရင်းဝင်သွားသည်။
အသျှင် တောင်ကလေးဆရာတော် သည် ကရင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာနှင့်သမိုင်းပညာရှင်အဖြစ်လည်း လူသိများသည်။ ဆရာတော်သည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ လှာကမြင်ရွာ၌ ၁၄၊ ဇူလိုင် ၁၉၆၀၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် ခမည်းတော် ဦးအောင်ခင်နှင့် မယ်တော် ဒ ...
ပတ်ချန်းယော သည် တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်နှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယား-တရုတ် ယောက်ျားလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ EXO နှင့် ၎င်းအဖွဲ့ငယ် EXO-K မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ပတ်ဆောဂျွန် သည် တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင် တဦး ဖြစ်ကာ၊ မင်းကလှခဲ့တယ် နှင့် ဟွားရန်၊ ကဗျာစစ်သည်လေး ဇာတ်လမ်းတွဲများဖြင့် ထင်ရှားသည်။ ငယ်ချစ်ဇာတ်ကားနှင့်လည်း လူသိများလာသည်။
ပတ်ဘိုဂွံ သည် တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တဦး ဖြစ်ပြီး Hello Monster၌ စိတ္တဇရှေ့နေအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Reply 1988 ၌ ဉာဏ်ကြီးရှင် ဂိုကစားသမားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Love in the Moonlight ၌ ဂျိုဆွန်အိမ်ရှေ့စံအဖြစ်လည်းကောင်း ပြောင်မြောက်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်၍ ချီးမွ ...
ပန်းရောင်ခြယ် သည် မြန်မာ တေးရေး နှင့် အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် ပွဲဦးထွက် album ဖြစ်သော Wake Up Daddy ကို သူမ၏ အဖေ ဂရေဟမ် နှင့် အတူသီဆိုခဲ့သည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA မှ ရန်မိုးလျံအား ထုတ်ပယ်ရာတွင် ဖုန်ကြားရှင်အား ပယ်ဆောက်ချိန်က ကူညီပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ဖုန်ကြားရှင်အား ဖယ်ရှားရန် ကြိုးပမ် ...
ပရာဘတ်စ် သည် အိန္ဒိယရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်အဖြစ် Telugu ရုပ်ရှင်လောက တွင် ကောင်းစွာထင်ရှားသည်။ Prabhas သည် ပွဲဦးထွက်အနေဖြင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်၌ Eshwar ဒရမ်မာရုပ်ရှင်တွင် စတင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Varsham, Chatrapathi, Chakram, Billa, Darling, Mr. Perfect န ...
​ ပရာယွတ်ချန်အိုချာ သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄အာဏာသိမ်းအစိုးရအဖွဲ့၏ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မ​တော်၏ ကာကွယ်​ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန် ထမ်း​ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။၂၀၁၄ခုနှစ် ယင်လပ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချကာ အာဏာသိမ်းယူပြီး ​နောက်ပိုင်းတွင် ...
ပိုင်ဇေရဲထွန်း သည် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကတွင် သရုပ်ဆောင် မင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၇−ခုနှစ်၊ မေလ ရက်နေ့တွင် အဖ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးရဲထွန်းနှင့် အမိဒေါ်သိင်္ဂီဇင်တို့မှ ရန်ကုန်မြို့တွင် မွေးဖွားသည်။ အမည်ရင်းမှာ ပိုင်ဇေရဲထွန်း ပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၇−ခုနှစ်မှ စတင် ...
ပိုင်တံခွန် သည် မြန်မာလူမျိုး မော်ဒယ်၊ သရုပ်ဆောင်နှင့် အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အနုပညာအလုပ်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ "သန်းခေါင်ယံခရီးသည်များ" ရုပ်ရှင်နှင့် "လူဆိုးလေးများ ၂" ရုပ်ရှင်တို့တွင် ဇာတ်ဆောင်မင်းသားအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ...
ပိုင်အုပ်စိုးအောင် သည် မြန်မာ အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်၊ မော်ဒယ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် နှလုံးသားနှင့်အနီးဆုံး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွင် စည်သူကျော် အဖြစ် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။
ပိုးကြာဖြူခင် သည် မြန်မာ အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် MRTV-4 ၌ ထုတ်လွှင့်ပြသသော မိုးကောင်းကင် အိပ်မက် မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ဆိုင်းမိုင် အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရာမှ လူသိများ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။
ပီတာ ကဲလ်နား သည် ၁၉၆၄ ခုနှစ် မေလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သော ချက်လူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သည်။ Forbes ၏ နောက်ဆုံးထုတ် ဘီလျံနာစာရင်းအရ သူ၏ လက်ရှိအချိန်ကြွယ်ဝမှုသည် ပျမ်းမျှ ၇.၆ ဘီလျံဒေါ်လာရှိပြီး ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တွင် အချမ်းသာဆုံး ...
ဆာ ပီတာ ရောဘတ် ဂျက်ဆန် သည် နယူးဇီလန် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်၍ စာရေးဆရာ ဂျေ အာ အာ တော်ကီးန် ၏ဝတ္ထုများဖြစ်သော လက်စွပ်များ၏ အရှင်သခင် သုံးကား နှင့် ဟော့ဘစ်သုံးကား ကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်တင်ဆက်ရာတွင် ဒါရိုက ...
၁၉၇၂ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်တွင် အဖ ဦးညွန့်ရှိန်၊ အမိ ဒေါ်ဌေးဌေးတို့မှ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျောင်းကုန်းမြို့တွင်မွေးသည်။ မွေးချင်း ၃ ဦးအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ သင်းသင်းမာဖြစ်သည်။ ၁၉၉၁ ခုတွင် ကျောင်းကုန်းမြို့ အမှတ် ၁ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင ...
ခရစ်သျှန် မိတ် ပူလီဆစ် ။ March 24, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ ၁၉၉၈ စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသည်) အမေရိကန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကစားသမား ဖြစ်သည်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် ချဲလ်ဆီးနှင့်အမေရိကန်အမျိုးသားအသင်းတို့အနေဖြင့်တောင်ပံကစားသမားတစ်ဦး သို့မဟုတ် ကွ ...
ပေါင်လို ဂျင့်ထိလွန်းနီ ဆီးလဗားရိ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာက ၁၂ ကတည်းက အီတလီဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့သော အီတလီနိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်သည်။ သမ္မတ ဆာဂျီယို မတ္တာရဲလာ က သူ့ကို အစိုးရသစ် ဖွဲ့ရန် ပြောဆိုသည့် အချိန်တွင်၊ ဂျင့်ထိလွန်းနီသည် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင် တဦးအနေနှင့် ၃၁ အ ...
ပေါလ် ကာဂါမေး ရဝမ်ဒါနိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရာထူးမှဆင်းသက်ပြီးသူ၏ယခင် Pasteur Bizimungu ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ၄ င်း၏ ၄ ယောက်မြောက်လက်ရှိရ ၀ မ်ဒါနိုင်ငံသမ္မတဖြစ်သည်။ Kagame သည်ရ ၀ မ်ဒါမျိ ...
ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင်မြို့နယ် ရွှေမျက်ဝရွာတွင် အဖ ပန်းချီပန်းပု လက်သမား ဆရာကြီး ဦးမောင်ပု၊ အမိဒေါ်အေး တို့မှ ၁၉၃၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ အမည်ရင်းမှာ ခင်မောင်စိုး ဖြစ်သည်။ မူလတန်းပညာကို ဇာတိရပ်ရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် အထက ...
ပြည့်ဖြိုးဇော် သည် မြန်မာလူမျိုး ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းတွင် နောက်တန်းခံစစ်နေရာမှ ကစားလျက်ရှိသည်။ သူသည် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် လူငယ်အသင်းမှ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကလပ်အသင်းသို့ ကစားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည့်ဖြိုးဇော်သည် ပဲခူးတိ ...
ပြည့်ဖြိုးအောင် သည် မြန်မာလက်ရွေးစင် ဂိုးသမား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် မြန်မာ နေရှင်နယ် လိဂ်ပြိုင်ပွဲဝင် ဆောက်သန်းမြန်မာ အသင်းတွင် ကစားလျက်ရှိသည်။
ပြေတီဦး သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုရ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပြေတီဦးကို ၁၉၇၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ရက်နေ့တွင် အဖ ဦးတင်မောင်ဦးနှင့် အမိ ဒေါ်တီတီတို့မှ ရန်ကုန်မြို့တွင် မွေးဖွားသည်။ ပြေတီဦးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သည့်အပြင် အနုပ ...
ဖရန်ကွိုက်စ် ပင်နော့တ် ကို ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး PPR လက်လီကုမ္ပဏီကို စီမံလုပ်ကိုင်နေသူ ပြင်သစ်စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် ပြင်သစ်သမ္မတဟောင်း Jacques Chirac ၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ လက်ရှိကုမ္ပဏီ Artemis S.A သည် အခြား ...
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် သည် ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်းတော်၏ ၂၆၆ ဦးမြောက်နှင့် လက်ရှိ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖြစ်သည်။ အခြားဘွဲ့များအနေနှင့် ရောမ၏ ဘစ်ရှော့ နှင့် ဗာတီကန်စီးတီးနိုင်ငံ ၏ ဘုရင် ဖြစ်သည်။ ဖရန်စစ်ဟူသော အမည်ကို ရွေးချယ်ရခြင်းမှာ ခရစ်ယာန် သူတော်စင် ...
ဖား‌‌အောက်တောရဆရာ‌တော် ဘဒ္ဒန္တအာစိဏ္ဏ သည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၆-ခုနှစ် ပထမဝါဆိုလဆန်း ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၁၉၃၄ ဇွန်လ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် နာရီအချိန်တွင် ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတမြို့နယ် လိပ်ချောင်းကျေးရွာ၌ အဖ ဦးပြူး၊ အမိ ဒေါ်စောတင် တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ စတ ...
မိဘများမှာ ဦးတင်ဝင်းသောင်းနှင့် ဒေါ်သိန်းသိန်းမြတို့ ဖြစ်၍ အမည်ရင်းမှာ ချစ်မျိုးထိုက်ဖြစ်၏။ မွေးချင်း ခြောက်ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးဖြစ်ကာ ၂၀၀၄−ခုနှစ်တွင် သင်္ချာဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ရွှေမန်းသူ အငြိမ့်တွင် ယိမ်းအက ဝင်ရောက် ကပေးရာမှ ဇာတ်သဘင်လောကထဲသ ...
ဖီလစ်ပ် ဟမ်ဆန် နိုက်တ် သည် ၁၉၃၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး Nike,Inc. ၏ စတင်တည်ထောင်သူနှင့် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်။သူသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုသာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ...
ဖုန်ကြားရှင် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကိုးကန့်အထူးဒေသ၏ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် ၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ၎င်းကွယ်လွန်သေ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ အထိ တာဝန်ယူခဲ့သည်။
ဦးဖေမြင့် သည် မြန်မာ အမျိုးသား စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးအဖြစ် သမ္မတဦးထင်ကျော်က အဆိုပြုခဲ့ပြီး မတ်လ ၂ ...
ဖောရက်စ် အက်ဒ်ဝါ့ မာ့စ် သည် ဖောရက်စ် အက်ဒ်ဝါ့ မာ့စ် ၏သားဖြစ်ပြီး Mars အမည်ရှိ အမေရိကန်သကြားကုမ္ပဏီကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ Frank C Mars ၏မြေးဖြစ် သည်။ မားစ်မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့် ဖောရက်စ် အက်ဒ်ဝါ့ မာ့စ် ပိုင် ရှယ်ယာနှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မျာ ...